Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Jaaliyada S.Ogadenia ee Denmark oo Qabsoomay
Shirkii Jaaliyada S.Ogadenia ee Denmark oo Qabsoomay
Waxaa maanta ooy taariikhdu tahay 29/03/2013, kadhacay xafiiska Jaaliyada Somalida Ogadenya ay kuleedahay caasimada Copenhagen ee wadanka Denmark shir baaladhan oo siwanaagsan loosoo agaasimay.
Shirkan ooy kasoo qaybgaleen dad badan ooy kamid yihiin gudiga maamulka jaaliyada, ururwaynaha OYSU–Denmark iyo dadkale oo shacab ah kuwaasoo kasoo kicitimay degmooyinka kaladuwan ee caasimada Copenhagen ay ka koobantahay iyadoo waliba maanta uu wadanka Denmark guud ahaan kada’ayo baraf aad ubadan ayay hadana kasoo qaybgaleyaasha shirku siwanaagsan usoo xaadireen kulankan.
Kulankan oo kamid ah shirarkii caadiga ahaa ee Jaaliyada yaa lagu falanqeeyay aadna loogu lafoguray hawlaha iyo ajendeyaasha uyaala jaaliyada S.Ogadenia ee kudhaqan wadankan Denmark.
Ujeedada ooguwayn ee kulanka looqabtay ayaa kamid ahayd dardar galinta waxqabadka iyo abaabulka bulshada oo kamid ah ajendeyaasha oogu muhiimsan ee jaaliyada horyaala wakhtigan xaadirka ah oo halganka S.Ogadenia uu marayo heer lagu naaloon karo.
Dhanka kale waxaa ka qaybgaleyaasha kulankan kamid ahaa masuuliin sare oo katirsan JWXO kuwaasoo soo bandhigay warbixino kusaabsan xaalada halganka Ogadenia iyo heerka maanta uu halganku marayo. Warbixintan ay masuuliintu soo jeediyaan ayaa aad ufarxad galisay dhamaan dadwaynihii shirka iskugu yimid.
Kulankan oo kusoo gaba gaboobay jawi aad uxiisad iyo xamaasad badan ayaa la,isku wada raacay xoojinta iyo dardar galinta hawlaha joogtada ah ee Jaaliyada Denmark ay higsanayso kamidho dhalintooda wakhtiga loogu talogalay in hawlahaas lagu soo afjaro.